ओछ्यानमै महिला बलात्कृत ! – sunpani.com
ओछ्यानमै महिला बलात्कृत !
नेपालगञ्ज – विहेको भोज चल्दै थियो । गानाबजाना थियो । ३५ वर्षीया महिला माइतीमा पर्ने विहेमा गएकी थिइन् । केहीबेर विहेमा बसेपछि उनी माइतीघरमा सुत्न आइन् । दाइभाउजुको घरमा उनी सुतिन् । दाइ घरमा थिएनन् । भाउजु बाहिरतिर थिइन् ।
आफन्त नै पर्ने २४ वर्षीय युवा कोठाभित्र पस्यो । मदिराले लठ्ठिएको उसले महिलालाई जबरजस्ती गर्यो । महिला कराएपनि विहेको हल्लाले कोहीले सुनेनन् । पछि महिला बाहिर निस्केर सबैलाई भनिन् । सबैले मिलेर युवकलाई समातियो । प्रहरीलाई खबर भयो । प्रहरी पुग्यो र युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर आयो ।
महिलाको अत्याधिक रक्तश्राव भएपछि उनलाई अस्पताल लगियो । शुक्रबार रातीको घटना थियो यो । युवकविरुद्ध जबरजस्ती करणीमा जाहेरी परेको छ । प्रहरीले युवकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको छ ।
महिलाको रक्तश्राव नरोकिएपछि शनिबार पनि अस्पतालमा राखिएको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय, कोहलपुरका डिएसपी कुलदिप चन्दले घटनालगत्तै अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याएको बताउनुभयो ।
जबरजस्ती करणीका घटनामा चिनेजानेका, आफन्तीकै संलग्नता रहने गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँकेका अनुसार, पछिल्लो ६ महिनामा २७ वटा उजुरी परेका छन् । गतवर्ष यो अवधिमा ३३ जनाको उजुरी परेको थियो । साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा जिल्लामा जबरजस्ती करणी उद्योगमा ७ वटा उजुरी परेका छन् ।